Nomery 23 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
23 Ary hoy i Balama tamin’i Balaka: “Anoreno alitara fito eto amin’ity toerana ity aho,+ ary asio ombilahy fito sy ondrilahy fito efa vonona eto.” 2 Avy hatrany dia nataon’i Balaka izay nolazain’i Balama. Ary nanolotra ombilahy iray sy ondrilahy iray teo ambonin’ny alitara tsirairay izy roa lahy.+ 3 Ary hoy i Balama tamin’i Balaka: “Mijanòna eto anilan’ny fanatitra dorana natolotrao,+ fa izaho kosa handeha. Angamba hifandray amiko i Jehovah ka hihaona amiko.+ Koa izay hasehony ahy no holazaiko aminao.” Dia nankeo amin’ny havoana iray mangadihady izy. 4 Ary Andriamanitra nifandray tamin’i Balama,+ ka hoy i Balama taminy: “Efa nataoko nilahadahatra ireo alitara fito, ary nanolotra ombilahy iray sy ondrilahy iray teo ambonin’ny alitara tsirairay aho.”+ 5 Koa nataon’i Jehovah teo am-bavan’i Balama ny teny,+ ka nilazany izy hoe: “Miverena any amin’i Balaka, dia lazao aminy izany.”+ 6 Dia niverina tany amin’i Balaka izy, ary indreo fa teo anilan’ny fanatitra dorana natolony i Balaka sy ny andrianan’i Moaba rehetra. 7 Ary nanao oha-teny+ i Balama hoe: “Nampanalain’i Balaka mpanjakan’i Moaba avy any Arama+ aho,Avy any amin’ny tendrombohitra any atsinanana, ka hoy izy:‘Tongava ka ozòny i Jakoba.Tongava ka melohy ny Israely.’+ 8 Ataoko ahoana no fanozona izay tsy nozonin’Andriamanitra?+Ary ataoko ahoana no fanameloka izay tsy nomelohin’i Jehovah?+ 9 Fa avy eto an-tampon’ny harambato no ahitako azy ireo,Ary avy eto amin’ny havoana no ahatazanako azy.Vahoaka monina eo amin’ny toerana mitokana izy,+Ary tsy mihevitra ny tenany ho isan’ireo firenena.+ 10 Iza no mahisa ny vahoakan’i Jakoba, izay maro be toy ny vovoka,+Ary iza no mahisa ny ampahefatry ny Israely?Aoka ho faty toy ny fahafatesan’olo-mahitsy aho,+Ary aoka ho tahaka an’izay hiafarany no hiafarako.”+ 11 Dia hoy i Balaka tamin’i Balama: “Fa inona izao ataonao amiko izao? Ny hanozona ny fahavaloko no nakako anao, nefa vao mainka mitso-drano azy indray ianao!”+ 12 Dia hoy ny navalin’i Balama: “Tsy izay teny ataon’i Jehovah eo am-bavako ihany ve no holazaiko?”+ 13 Ary hoy i Balaka taminy: “Andao mba hiaraka amiko ho any an-toeran-kafa, izay hahitanao an-dry zareo koa. Ny olona eny an-tsisin’ny tobiny ihany no ho hitanao,+ fa tsy izy rehetra. Ary ozòny ry zareo rehefa any ianao.”+ 14 Koa nentiny nankeo amin’ny sahan’i Zofima teo an-tampon’i Pisga+ i Balama. Ary nanorina alitara fito i Balaka, ka nanolotra ombilahy iray sy ondrilahy iray teo ambonin’ny alitara tsirairay.+ 15 Ary hoy i Balama taminy: “Mijanòna eto anilan’ny fanatitra dorana natolotrao, fa izaho kosa hankerỳ hifandray amin’Andriamanitra.” 16 Dia nifandray tamin’i Balama i Jehovah ka nataony teo am-bavany ny teny, ary nilazany izy hoe:+ “Miverena any amin’i Balaka,+ dia lazao aminy izany.” 17 Koa nankeo amin’i Balaka izy, ary indreo fa teo anilan’ny fanatitra dorana natolony i Balaka sy ireo andrianan’i Moaba. Ary hoy i Balaka tamin’i Balama: “Inona no nolazain’i Jehovah?” 18 Dia nanao oha-teny i Balama hoe:+ “Mitsangàna, ry Balaka, ka mihainoa.Mihainoa ahy, ry zanak’i Zipora+ ô! 19 Tsy mba olona Andriamanitra ka handainga,+Na zanak’olombelona ka hanenina.+Efa nilaza ve izy ka tsy hanatanteraka,Ary efa niteny ka tsy hanefa?+ 20 Nampiantsoina aho mba hitso-drano,Ary nitso-drano Izy+ ka tsy hanao mifanohitra amin’izany aho.+ 21 Tsy avelany hisy hampiasa herin’ny maizina+ hamelezana an’i Jakoba,Ary tsy avelany hisy loza hanjo ny Israely.I Jehovah Andriamaniny no momba azy,+Ary manakoako eo aminy ny fihobiana ny mpanjaka. 22 Entin’Andriamanitra mivoaka avy any Ejipta izy ireo,+Ary miriotra mafy toy ny ombidia.+ 23 Fa tsy misy heriny eo amin’i Jakoba ny ozona famosaviana,+Ary tsy misy heriny eo amin’i Israely ny sikidy.+Koa ankehitriny dia azo atao ny milaza momba an’i Jakoba sy Israely hoe:‘Jereo izay nataon’Andriamanitra!’+ 24 Jereo fa hitsangana toy ny liona ny firenena iray,Ary hijoro toy ny liona izy.+Tsy handry izy raha tsy efa nihinana remby,Ary ny ran’ny voavono no hosotroiny.”+ 25 Dia hoy i Balaka tamin’i Balama: “Raha tsy afaka manozona azy mihitsy àry ianao, dia aza mitso-drano azy koa.” 26 Fa hoy ny navalin’i Balama: “Tsy efa nilaza taminao ve aho hoe: ‘Izay rehetra holazain’i Jehovah ihany no hataoko’?”+ 27 Ary hoy i Balaka: “Andao re hoentiko ho any an-toeran-kafa indray ianao e! Angamba ho tsara eo imason’ilay tena Andriamanitra izany, ka hanozona an-dry zareo tokoa ianao rehefa any.”+ 28 Dia nentin’i Balaka teo an-tampon’i Peora, izay ahatazanana an’i Jesimona,+ izy. 29 Ary hoy i Balama+ tamin’i Balaka: “Anoreno alitara fito eto amin’ity toerana ity aho, ary asio ombilahy fito sy ondrilahy fito efa vonona eto.”+ 30 Dia nanao araka izay nolazain’i Balama i Balaka, ka nanolotra ombilahy iray sy ondrilahy iray teo ambonin’ny alitara tsirairay.+